I-Gatehouse-I-Cozy Retreat w/ ukufikelela elunxwemeni.
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKerianne
Le ndlu isanda kulungiswa ibonelela ngabo bonke ubutofotofo bekhaya. Ilungele izibini okanye iintsapho ezinabantwana abancinci. Le yindlu yokulala enye enesofa yokutsala kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlambela elinendawo ezi-3. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. I-BBQ. Ukufikelela echibini kungepropati yomnini-khaya. Ukonwatyiswa kwakho kukho iTV yescreen esicaba (isathelayithi), iwifi, imidlalo yebhodi kunye neencwadi. Le ndawo ikumgama wokuhamba kuzo zonke izibonelelo zelali.
Iindwendwe ziyayithanda le ndawo ipholileyo. Ivakala ngathi yindawo yokuzimela ecaleni kwedolophu. Thatha ithuba lokufikelela elunxwemeni kwaye uphumle ngaselunxwemeni, qubha, okanye uhlale ecaleni komlilo ovuthayo ngokuhlwa.
4.76 ·Izimvo eziyi-50
4.76 · Izimvo eziyi-50
Umbuki zindwendwe ngu- Kerianne
Ndifumaneka nge-imeyile okanye isicatshulwa ukuphendula nayiphi na imibuzo. Ndiza kuphendula kwiyure! Umphathi wepropathi uhlala kufutshane kwaye unokubonelela ngalo naluphi na uncedo olongezelelweyo ukwenza ukuhlala kwakho ukonwabele.